खोप लाउन नमान्ने राष्ट्रपतिलाई घरेलु खेल मैदानमै प्रतबन्ध! – Health Post Nepal
खोप लाउन नमान्ने राष्ट्रपतिलाई घरेलु खेल मैदानमै प्रतबन्ध!
२०७८ असोज २५ गते १६:३६
खोप लाउन नमान्ने ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई घरेलु खेल मैदानमै प्रतबन्ध लगाइएको छ।
ब्राजिलको घरेलु टिम सान्तोस र ग्रिमिओ फुटबल क्लब बीच घरेलु मैदानमा भइरहेको क्लब स्तरीय खेल हेर्न राष्ट्रपतिलाई रोक लगाइएको हो। खोप नलगाएका व्यक्तिहरुलाई खेल हेर्न क्लबले अनुमति नदिएपछि राष्ट्रपति समस्यामा परेका हुन्।
‘मैले फुटबल हेर्न खोजे। त्यहीबेला उनीहरूले मलाई खोप लगाएको हो भनेर सोधे,’ बोल्सोनारोले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै भनेका छन् । ‘फुटबल हेर्न किन खोप लगाउनु पर्‍याे?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
बोल्सोनारोले अहिलेसम्म कोभिड खोप लगाउन मानेका छैनन् र अरुलाई पनि नलगाउन दुत्साहन गर्दै आएका छन्। कोभिड संक्रमणलाई उनले जहिले पनि हल्का ढंगले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। आफ्नो शरीरमा पर्याप्त एन्टीबडी भएकोले खोप लगाउन आवश्यक नभएको उनले बताउँदै आएका छन्।